Waajibka ah in magdhow laga bixiyo waxyeelada soo gaadhay dadka aan waxba galabsan ee Falastiin - Rabbi Michael Avraham
Waajibka bixinta magdhowga waxyeelada loo geysto dadka Falastiiniyiinta ah ee aan waxba galabsan
Jawaabta > Qaybta: Guud > Waajibka bixinta magdhowga waxyeelada loo geysto dadka Falastiiniyiinta ah ee aan waxba galabsan
Pine La weydiiyey 5 bilood ka hor
Ma jiraa waajib saaran dawladda Israa’iil in ay magdhow siiso dadka falastiiniyiinta ah ee aan waxba galabsan ee ay waxyeelo ka soo gaarto ficillada dawladda Israa’iil ee ka dhanka ah Xamaas?
Iyo su'aal kale, haddii aad kufto Qalad Ficilka ciidan gaar ah, iyo qaladka uu geystay falastiiniyiin lagu dhaawacay, ma waxaa saaran waajib ah in magdhow la siiyo?
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 5 bilood ka hor
Maqaalkaygii aan kaga hadlay darbi-jiidheedka darbi-difaaca (qofka iyo dadweynahaba) waxa aan ku soo gunaanadayaa haddii ay tahay qolo saddexaad (oo aan Falastiini ahayn) oo falkayagu waxyeello ka soo gaadhay, waxaan odhan lahaa haa, ka dibna Xamaas lagu dacwayn karo. waxyeelada. Laakin arinta falastiiniyiinta waxay iila muuqataa in ay si toos ah ugu soo jeestaan ​​Xamaas oo iyaga u dagaalanta oo hadafkeedu uu magdhaw ka bixiyo. Sidan oo kale aan loo baahnayn in dadka aan la dagaalamayno magdhaw laga siiyo askarta ku dhaawacantay dagaalka aan loo baahnayn. Horaa loo yidhi marka dagaal dhaco, chips ayaa soo fida.
Pine Waxay u jawaabtay 5 bilood ka hor
Waxaan xusuustaa laakiin waxaad sidoo kale halkaas ku qortay in haddii la silciyey uu badbaadin karo silciga in mid ka mid ah xubnihiisa oo uusan badbaadin markaas waa inuu. Waa maxay sababta aysan halkan sidoo kale uga ansaxeynin khaladaadka?
mikyab Shaqaale	Waxay u jawaabtay 5 bilood ka hor
Marka hore, yaa sheegay inay ahayd xaalad uu badbaadin karay? Waxaa jira qaxooti nugul oo lama huraan ah. Marka labaad, xitaa haddii ay jirto hab looga fogaado kiiskan gaarka ah khaladaadku way dhacaan waxayna qayb ka yihiin habka adduunka dagaalka.
Habka Maimonides ayaa ah in dilkan uusan ahayn mid waajib ah. Waa mamnuuc laakiin maaha dilaa. Habka Ths waa haa.
Hasbra waxa ay sheegtay in haddii aan si lama filaan ah u waxyeeleeyay hantida mulkiilaha aanan ahayn in aan magdhow bixiyo. Oo qaar markii hore iyo kuwii u dambeeyey qoray in in silciyey naftiisa sidoo kale ma jiraan wax mamnuuc ah in la dilo xitaa marka uu badbaadin karo in mid ka mid ah xubnihiisa. Tan waxa kaliya oo laga sheegay qolo saddexaad.
Haddii ay dhacdo dhacdo uu mid ka mid ah ergada Dawladda Israa’iil (Askari/Booliska) ka leexday oo uu ku kacay fal xaasidnimo ah oo ka dhan ah muwaadin Falastiini ah (ka soo qaad in askari uu kufsaday Falastiini). Xaaladdan oo kale, ma jiraan waajibaad ka saaran Dawladda Israa'iil inay magdhowdo isla dhibbanaha dembiga?
Sidaas ayaan u maleynayaa. Markaa waxaa bannaan in lagu dacweeyo askariga lacagta u soo celin doona dawladda. Laakiin wuxuu ku dhaqmay awood iyo xoog (xukun iyo hub) ay siisay, markaas iyada ayaa ka masuul ah falkiisa.
Haddii lagu kufsaday wax aan jirin, ma aha in lagu kufsado awood hub ah ama maamulka uu helay ee sida nin kale, markaa aniga aragtidayda, sheegashadu waa mid isaga ka dhan ah oo ma jirto wax waajib ah oo qaranku leeyahay.
Xagga mas’uuliyadda qaranku sidee buu u raacayaa waxa aad kor ku soo qortay ee ah in qaranku khaladka uu galay aanu masuul ka ahayn, halka halkan uu ka masuul yahay xumaanta ergadeeda (taasoo marka laga eego dhinaca dawladda aanay ahayn). loo arkaa xaasidnimo).
Sababtoo ah waxaa laga hadlaa khasaaraha ka dhashay dagaalka, taasna wax mas'uuliyad ah ma saarna sababtoo ah waxaa jira sharci si wadajir ah u silcinaya. Laakiin kaliya fal gardaro ah oo aan ahayn ujeedada dagaalka hubaal waxaa jira waajibaad magdhow ah. Ma jiro sharci cadaadis halkan.
Kiis kan la mid ah ayaa la og yahay in sannadkii 2000 Mustafa Dirani uu dacweeyay dawladda Israa’iil magdhow, isagoo ku andacoonaya in laba kiis oo xadgudub galmo ah loo geystay dad su’aalo weydiiyey. Waxyaalaha kale, eedeymaha waxaa ka mid ah in mid weyn oo ku jira Cutubka 504, oo loo yaqaan "Captain George," uu kuwan geliyey dabada Dirani. Sida uu sheegay Dirani, intii ay su’aalaha weydiinayeen waxaa loo geystay jirdil ay ka mid yihiin rux, bahdil, garaacis, hurdo la’aan, iyo in lagu xiro jilba joog muddo saacado ah, iyo bahdilaadii uu sameeyay ayaa la wareystay isagoo qaawan. Cajalado baadhiseed, oo ay duubtay Cutubka 10, ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka talefishanka ee "Xaqiiqda" December 504, 15.  Mid ka mid ah fiidiyowyada, baaraha George ayaa la arkay isaga oo wacay mid ka mid ah baarayaasha kale oo ku amraya inuu surwaalkiisa u galbiyo Dirani oo uu Dirani ugu hanjabo kufsi haddii uusan bixin macluumaad.
Bishii Luulyo 2011, Maxkamadda Sare waxay xukuntay, ra'yiga aqlabiyadda, in Dirani uu sii wadi karo inuu sii wado dacwad jir dil ah oo uu ka gudbiyay Dawladda Israa'iil, inkasta oo uu deggan yahay waddan cadaw ah, oo uu xitaa ku soo laabtay ku lug lahaanshaha dhaqdhaqaaqyada cadawtinimo ee ka dhanka ah gobolka  Codsigii gobolka, ayaa mar kale la dhegeystay, waxaana bishii Janaayo 2015 la go’aamiyay in sheegashada Dirani la jebiyo, iyadoo loo cuskaday in Diraani xabsiga laga sii daayay kaddib uu dib ugu laabtay urur argagixiso oo hadafkiisu ahaa inuu tallaabo ka qaado dowladda. oo xataa halaagsiiyo.
Halkaa waxaa laga arkayaa in ay quseyso su'aasha ah in qofka dacwoonaya uu degan yahay dal cadow ah iyo in kale. Waxa kale oo aan xusuustaa in uu jiro xeer laga soo bilaabo waagii sharciga Ingiriiska oo dhigaya in aan cadow dacwayn karin.
Jawaabahaygu maaha kuwo sharci ah (ma ihi khabiir ku takhasusay sharciga caalamiga ah). Waxaan idhi fikradayda heerka akhlaaqda.
Dhanka Diraani dhibku ma ahayn in uu ku noolaa dal cadow ah ee waa cadaw firfircoon. Qofkasta oo ku nool dawlad cadaw ah waxa hubaal ah in uu sheegan karo magdhow, laakiin waa haddii wax lagu sameeyo si sharci darro ah oo aan ahayn xaalad dagaal (ie. Waxaan filayaa in jidh-dilkan loo samaynin isaga oo kaliya ee ay tahay in xog laga soo saaro. Sidaa darteed kuwani waa falal dagaal. Haddii ay hadda uun ku xad-gudbeen, xitaa haddii ay ahayd xarunta GSS oo qayb ka ah baaritaanka, xitaa cadow ahaan wuxuu awoodi karaa inuu sheegato magdhow, taasina waxay ahayd doodii halkaas ka dhacday.
Dhanka kale, doodda ah in haddii uu ku dhaqmo burburinta qaranka ay ka qaadayso xaqa uu u leeyahay inuu isticmaalo hay'addeeda, waxay iila muuqataa mid aan shaki ku jirin sharci ahaan. Askari kasta oo cadaw ah (maxbuus) ah xaalad noocaas oo kale ah ayuu ku sugan yahay, waxaanan filayaa in aanu qofna sidaas askari ka odhan. Waxay sidaas u sheegeen Dirani waayo waa Argagixiso.
Waxaa intaa dheer, waxaa jirta dood halkan ka taagan: Haddii xadgudubku uu dhaafo wixii xalaal ah ama loo sameeyay ujeedo xadgudub ah, xitaa haddii Dirani uusan xaq u lahayn inuu dacweeyo dawladda waxay ahayd in la baaro oo la ciqaabo ciddii falkaas samaysay (ciqaabta ciqaabta). iyadoon loo eegin dacwad oogista Dirani). Haddayse ka leexan waayeen, maxaa dhib ah oo uu cadow u yahay. Wax sabab ah ma jirto.
In argagixisada lagu soo oogo magdhow Waxay u jawaabtay 5 bilood ka hor
B.S.D. XNUMX ee qabiilka P.B
Waxay u muuqataa in ururada argagixisada ah ee falkooda dilka ah ee IDF looga baahan yahay inay difaac iyo ka hortagba ka qaadaan inay yihiin kuwa lagu leeyahay magdhowga khasaarihii ka soo gaaray dagaalka intii ay socdeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan, Yuhuud iyo Carab.
Salaan, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Cherries
Ku biir 3,092 macaamiil dheeraad ah
Sidee u aragtaa heshiiska Oslo?
Kursiga yar ee dugsiga sare VS
Inaad is disho? Ugu yaraan sida uu qabo Ths.
Eli K. Daaran Jawaabta Bacal Shem Tov iyo sigaar cabista, nafta Rabbi Nachman ee Breslav
deerada Daaran Jawaabta Bacal Shem Tov iyo sigaar cabista, nafta Rabbi Nachman ee Breslav
Waxba ha ku darin hana ka dhimina Daaran Jawaabta ololaha Nida
dhamaystirid Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)
Xayawaankeeda Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)